CCTV Maalii ? – Kutaa 1ffaa – Akkam Jirtuu? Nooraa!
CCTV Maalii ? – Kutaa 1ffaa
CCTV ykn Kaameeraan eguumsa maali ?
CCTV jechuun (Closed Circuit Television) jechuudha. Faayidaan isaas odeeffaano bifa suur-sagaleen bakka kaameeraan to’annoo jiruu irraa sassaabuun agarsisuuf olkuusuufi kaahudhaaf nu gaargaara. CCTV yeroo jalqabaatiif USA bara 1940 misaayila to’achuudhaaf eegalanii kanaanis haala dhuukaasa misaayila irraa fagatanii ilaaluu dandahaniru. Waggaa 9 booda ameerikaa kessatti haala seera qabeessa taheen gurguramuu eegalee, Bara 1960 biyyi Ingiliziis karaa gurguddaa bakka geejjibbaaf bakka addaa addaatti ifa gochuun fayyadamuu eegalte.
CCTV maal irraa walitti qindaahaa?
Qaamoota 4 irraa walitti qindaahaa isaanis.
(Video surveillance camera) – kaameeraa odeffannoo funaanu jechuudha,kunis gargaarsa lensiif qaamota elektroniki biraatin walitti dhufandha
(Transmission medium)- Gosoota cable wal qunamsisuf nu gargaaran kannen akka (Coaxial Cable , Fiber optics, UTP fa’i jechuudha.
(Storage)- Odeffannoon kaameraa irraa sassaabame bakka itti kuufamu jeechuudha kunis NVR ,DVR ykn NAS tahuu dandaha.
(Display mode)- Kun akkaataa itti sur-sagaleen kallattiin ykn kuusaa irraa ittin agarsiifamudha kunis (HDMI,VGA,Monitor)dhan jeechuudha.
CCTV kun bakka meeqati qoodama ?
CCTV bakka gurguddaa lamati qoodna kunis kan tahuu dandaheef mala wal qunnamti isaatiif jechuudha.
Mallii wal qunamtii isaa (Coaxial cable) dhaan yommuu tahuu signaalii analog tahee bifa vidiyoo qofaan kan dabarsudha.Sagaleefi humna dabarsuuf sarara shiboo dabalata dirirsuun dirqama.
Goosotni meeshaale wal qunnamsiiftu kanaaf oolan (BNC connector , HDVI Ballun , Power tail connector) fa’i.
Odeeffaanno kaameraa irraa argame kuusuf tamasaasuuf maal fayyadama ?
(DVR – Digital Video Recorder) Odeffannoo bifa analogitiin dhufe gara dijaataalati inkood goochuun kuusa jeechuudha, kaameraawan waliin kan wal qunnamuus BNC koneektarii fayyadamuuni jecudha.
DVR sarara inteerneti ykn LAN kessumessuu wan dandahuuf neetworki keenya waliin wal qunnamsiisuun odeffannoo bakka biraa tenye ilaalu dandeenya.Kanas kan gochuun dandahamu (port forwarding , DMZ fi DDNS) fayyadamuuni jeechuudha
Gosa cctv mala walqunamsiiftu UTP cable, wireless fi fiber optics wal qunnamudha. Sarara kebilii dirarfamee irratti osoo sarara biraa hin diriirsin sagalee , vidiyoo fi suuraa tamsaasu dandaha. Odeffannoo olkuusuf meeshaa NVR jedhamu fayyadama.
(NVR – Network attached recorder) meeshaan kun dvr irraa kan adda isa godhu odeeffannoo kaameeraa irraa IP adireesii fayyadamuun wal qunama , sarara cable tokko qofaa fayyadamuun sagalee,vidiyoo fi suuraa wal dukaa dabarsa.
Kameeraan IP kallattiin NVR waliin wal qunamuuf ni dandaha kunis teekinoolojii POE jedhamu fayadamuuni jechuudha.
POE jechuun (Power over Ethernet) sarara keebilii UTP fayyadamuun odefannoos humna elektrikii kaameraa IP tochosuus erga.Kunis kan wal-qunnamu switch port ykn rj45 fayadamuuni jechuudha.NVR tokko tokko (POE enabled port) qabaachuu dandaha.
(IP based camera) baasii dabalata sarara humna elektriikii dabarsuu dirirsuu nu barbaachisa.
Goosota CCTV kaameeraa
Goosoota cctv kaameeraa jenne bakka gurguddaa lamatti qoodnee ilaaleerra, (analogifii IP based) jennera.Hatahuu malee bocaafii bakka fayyadama irratii hundaahuun garagarummaa qabu jechuudha.
(Bullet Camera) – Goosti kaameera kuun (indoor fi ourdoorifis kan jiruudha.Sababi bullet jedhameefis boca silindarii kan qabuuf xiqqoo kan dherina qabu wan taheef. Fayidaan isaa inni guddaan gara fullee isaatti fagessee ilaalu waan dandahuuf naannoo parkinigii konkolaataa, dallaa balina qabufi bakka kuusaa meeshaa (store,warehouse) naannoo akkasitti fayadamuuf filatamaadha.
Dome Cameras – Goosti kaameraa kuun bocaan walakkaa geengoo fakkaata.Hanganiis xiqqoodha,buleti irraa wanti adda isa godhu dandeetti balisee ilaaluu isaati kunis(Wide range coverage wan qabufi)
(PTZ – Pan tilt zoom) jedhamuun bekama ,goosa kameeraa haala laman bakka bakkatti sochohuu dandahudha. Haalli tochii isaa electronikii ykn robotiksii tahuu dandaha. Elektrooniikii PTZ kan jennu softiweerii ykn mosaajii kaameraa kana ittii to’annuun tochoofna tochiin kunis kameeraa kana irratti tochi bakkeedhaan mul’atu miti.
Robotics PTZ – Goosa kameera tochiin isaa mul’atudha oliifii gadi nannahuun tochii to’ata jechuudha.
Wireless IP camera :- goosa kameeraa sarara shiboo malee odeffannoo gara NVR fi gara bilbila keenyati erguu dandahuudha, goosti kaameraa kun kan humna elektrikaa (power adapter) fayyadamuudhaan jechuudha.Halli inni ittin odeffannoo dabarsuus toora (wireless signal) fayadamuuni jechuudha. Kanafis (wireless access point /router) barbaachisadha jechuudha.
Gudachuu tekinolojiin wal qabatee (mini camera) nis jira jechuudha warren kun golgituu ijaa , yeroo harkaa , iftuu (hampoolii) kessa dhoksuudhaanille ni hojatamu jechuudha.
Kutaa Lammaffaan itti fufa